Maxay Ku Kala Duwan Yihiin Premier League & Bundesliga? – Timo Werner Oo Caddeeyey Kala-duwanaanshaha Labada Horyaal – Laacibnet.net
Maxay Ku Kala Duwan Yihiin Premier League & Bundesliga? – Timo Werner Oo Caddeeyey Kala-duwanaanshaha Labada Horyaal
September 15, 2020 Abdiwahab Ahmed
Weeraryahanka reer Germany ee Timo Werner oo kasoo ciyaaray horyaalka Bundesliga dhawrkii sannadood ee ugu dambeeyey ayaa waxa uu xalay u saftay Chelsea ciyaartiisii ugu horreysay ee Premier League ah, waxaanu sharraxaad ka bixiyey kala-duwanaanshaha labada horyaal.
Werner oo lagu galay rikoodhe sabab u noqday goolkii koowaad ayaa Chelsea ka caawiyey inay 3-1 kaga adkaato Brighton, waxayna qiimayntiisa kulankaasi caddaysay in 24 jirkani uu yahay laacibkii ay Blues uga baahnayd afka hore oo uu dib usoo xasuusin doono Didier Drogba.
Inkasta oo ay ahayd ciyaartiisii ugu horreysay ee kulan tartan ah ee uu u safto Chelse,a haddana garoonka AMEX Stadium ee ay Brighton iska leedahay, waxa uu u ahaa mid aanu wax dhibaato ah ku dareemayn, iyadoo 90kii daqiiqadood ee ciyaartana dhamaystay.
Kaddib ciyaartiisii koowaad ee xalay, Timo Werner ayaa sharraxay farqiga u dhexeeya Bundesliga iyo Premier League, waxaanu yidhi: “Waxay ahayd ciyaar adag markii ay 1-1 ahayd, kaddibna Reece ayaa dhaliyey gool cajiib ahaa. Aad ayaan ugu faraxsanahay guusha maanta.
“Ciyaartu gebi ahaanba waxay ahayd mid ka duwan (kuwii Jarmalka). Waxa jiray meelo badan oo fakaag ah, laakiin markii aanu nimid qaybtii labaad ciyaartu waxay noqotay mid ka duwan sidii hore. Gebi ahaanteedba way isbeddeshay. Brighton waxay nagu abuurtay dhibaatooyin badan.
“Waxaan ka hor tegay saddex difaac oo waaweyn, Germany sidaas kuma arkaysid. Waan ku faraxsanahay inaan halkan joogo waxayna ila tahay in kulankaygii ugu horreeyey uu aniga iyo kooxdaba u fiicnaa.
Guul Timo werner